रामायण-महाभारत : कहाँ छन् राम, कहाँ छन् कृष्ण ?::mirmireonline.com
महाभारत श्रृंखलाको पर्दामा कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी बन्ने सौभाग्य पाएका कलाकारको पनि जीवनकथा कम रोचक छैन।
यी धारावाहिकले हिन्दी भाषाको विस्तार गर्‍यो। दलितमाथि हुने भेदभाव बढायो। पुरुष मर्यादापालक वीर कहलियो। महिला रुखको फेदमा बसी बिलौना गर्ने र सार्वजनिक रूपमा निर्वस्त्र हुनुपर्ने कमजोर प्राणीको रूपमा चित्रित भए। र, समाज महिला हिंसातर्फ थप आकर्षित भयो। (उदाहरण द्रौपदीको भूमिकामा अभिनय गरेकी रूपा गांगुलीको जीवन कहानी नै पर्याप्त छ।) त्यही बिन्दुबाट घरघरमा बलिउड घुस्यो। बलिउडसँगै उतैको सौन्दर्य र सुन्दरतासम्बन्धी अवधारणा पनि घुस्यो। सिरियलको लत घुस्यो। अनि सँगै घुस्यो बजार। र, टेलिभिजन कम्पनीले मालामाल व्यापार गरे। यसकारण दुई धारावाहिक फगत टेलिशृंखलामात्रै थिएनन्, सांस्कतिक हस्तक्षेप गर्ने ‘पोलिटिकल गेम’ थिए। -अन्नपुर्णपोष्टबाट
प्रचण्डकाे नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु गर्नुपूर्व गरिएका यी ७ प्रतिबद्धता, पुरा भए त ?
मेरो संस्मरणमा जनयुद्ध र एकिकृत जनक्रान्तिमा सहभागिता – सुमनसिंह पौडेल